Rosary yamaKatolika Discover Discover Discover Online. ➡️
El Irosari yamaKatolika Ngomnye wemithandazo yesiko kwiNgqobhoko el mundoNamhlanje siza kukunika zonke iinkcukacha ezidibanisa le ntshukumo intle yokomoya noYesu nonina.
1 Ubukhulu beRosari yamaKatolika
2 Uyilo kunye nolwakhiwo
3 Imbali yeRosari yamaKatolika
3.1 Eminye imibhalo-ngqangi
3.2 Ukuthandwa kunye nophuhliso
3.3 Ukuguquka kwemvelo
5 Zithini iimfihlakalo?
6 Iziqulatho zemfihlakalo nganye
7 Uthandaza njani?
Ubukhulu beRosari yamaKatolika
Lo mthandazo wamaKatolika waziwa kangangeminyaka emininzi, igama lawo livela kwirosari yamaLatin aphakathi, nakwimpuma yeLatin Rosarium rosaleda, eguqulela njengeentyatyambo zeeroses okanye isithsaba seentyatyambo. Ukufezekiswa kwayo kuvumela ukukhumbula iimfihlakalo ezingamashumi amabini ezinxulumene nobomi bukaYesu kunye neNtombikazi kaMariya.
Ulwakhiwo lwerosari yamaKatolika lugcina ifom ethi emva kokubhengeza nokuchaza imfihlakalo, uMthandazo weNkosi, ishumi leSichotho sikaMariya nozuko kuYise kuthiwe. Inkolo yamaKatolika iyichaza njenge irosari engcwele. UPopu oNgcwele uJohn Paul II wathetha ngaye esithi:
«NgeRosari abathembekileyo bafumana ubabalo oluninzi, kanye ezandleni zoMama woMhlawuleli. "
Uyilo kunye nolwakhiwo
Irosari UmKatolika wenziwe ngothotho lwamaso okanye imitya, (ii-nuggets) ezisebenza ukugcina ukubala komthandazo ngamnye ngelixa ucamngca ngemfihlelo ethile. Inye nganye yahlulwe ngokobungakanani obulinganayo obulishumi, ngelixa umtya uhlanganiswe kwiziphelo zawo zombini ngumnqamlezo.
Imbali yeRosari yamaKatolika
Iimbali-mlando ezininzi zonqulo zijonga ukuba i-rosari ihambelana nezithethe zakudala kakhulu, ezazivela empuma nasentshona. Nangona kunjalo, ineengcambu zayo ngekhulu le-XNUMX, xa amakholwa amaninzi ahlonipha iNtombikazi kaMariya ngokumgcina njengokuzinikela.
Abanye abaphandi bafumana umbhalo-ngqangi owawusuka ngonyaka we-1501, owawukwithala leencwadi laseMunich, apho kuboniswa ukuba irosari yokuqala yavela ngenxa yomyalelo weSan Benito, eyazidibanisa njengomsebenzi kwi-Order yeCarthusians.
Ukuthandwa kunye nophuhliso
Ngenkulungwane ye-XNUMX, irosari yayisele ithandwa kakhulu kwizixeko ezininzi zaseYurophu. Nangona kunjalo, abanye abantu bayala ukuyamkela, njengamaCathars okanye iiAlbigenses, ekuhambeni kwexesha ukuzinikela kwiNtombi Enyulu kwehle kancinci ukuya kwinkulungwane ye-XNUMX, kodwa basekhona abashumayeli abayisebenzisayo.
Kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe kukho ukuvuselelwa kwerosari enkosi ku-Alano de la Roca, kunye noJacobo Sprenger wangaphambili, ababengamalungu e-convent yolawulo e-Cologne eJamani. Ngelo xesha iimfihlelo zesivumo sokholo, uBawo wethu Osezulwini kunye no-Hail Mary babesele bephethwe njengezona zinto ziphambili kwimithandazo yabo.
Ukusetyenziswa kwendalo yonke kwasetyenziswa umbulelo kuPopu Pius V, owapapasha i-Breviary yaseRoma, apho ukusetyenziswa kwerosari kubonisiwe ekuqaleni kweyure nganye yeOfisi kaThixo, emva koBawo Wethu.
Emva kwenkulungwane yeshumi elinesibhozo ukuya kwinkulungwane yeshumi elinesithoba, irosari yathandwa ngakumbi kuluntu lwamaKatolika, kwenziwa amawaka, awasasazwa phantse kuzo zonke iicawa zaseYurophu. Ngesi sizathu baqala ukumela uphawu lokholo kumaKatolika, kunye nokubonakala kweNtombi Enyulu yaseFatima ePortugal ngo-1917 owanika izikhombisi ezisondelelene nendlela ekufanele kuthandazwe ngayo irosari.
I-rosari yamaKatolika yenziwe ngeemfihlakalo ezi-4, ezithandazwayo ngeentsuku ezithile zeveki. Kodwa ubungcwele bakhe oNgcwele uJohn Paul II kwileta yabapostile iRosarium Virginis Mariae, wadibanisa imfihlelo eyongezelelweyo ebizwa ngokuba kukukhanya.
Nganye yezi mfihlakalo inemixholo emihlanu ekhokelela ekucamngceni ngexesha lokwenza iirosari. Ziyimbonakaliso yezona zihlandlo ezibaluleke kakhulu ebomini bukaYesu kunye neNtombikazi kaMariya. I-rosari imele iiroses ezinikezwe ngohlobo lomthandazo kwiNtombikazi enguMariya, ukuba zisincede kuYesu.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, irosari yayikade inikezelwe kwiimfihlakalo ezi-3 kuphela ekufuneka zithandazwe ngokulandelelana kwinqanaba elinye ngobusuku. Ngo-2002 uPopu John Paul II waquka enye imfihlakalo eyayibizwa ngokuba kukuKhanya. Ndiyabulela kolu hlengahlengiso kunye notshintsho kumthandazo weRosari, bezi zilandelayo:
Imivulo eyoMvulo kunye neMigqibelo kwaye ngexesha lokufika kunye IKrismesi.
Intlungu, uLwesibini nangoLwesihlanu, kwaye ngexesha leLente.
Bright, kuphela ngolwezine
Ozukileyo, ngeCawa nangoLwesithathu, nakwixesha lePasika
Iziqulatho zemfihlakalo nganye
Vuyo: ziqulathe isibhengezo sengelosi kwiNtombi Enyulu uMariya, utyelelo lweNtombi Enyulu kumzala wayo uElizabhete, ukuzalwa kukaYesu, ukuhanjiswa kweNkosi kunye nokudibana kwabo etempileni.
Intlungu: iqulethe umthandazo weNkosi eGadini yaseGetsemane, i-flagellation, isithsaba ngameva, ukuhamba kukaYesu ukuya emnqamlezweni emqolo, kunye nokubethelelwa nokufa kwiNtaba yeKalvari.
Ukukhanya: kucamngca ngobhaptizo lukaYesu kuMlambo iYordan, ukuzityhila emtshatweni waseKana, ukushunyayelwa koBukumkani bukaThixo kunye nokuGuqulwa kunye nokwenziwa kwawo kumila kumbi kwiNtaba yeTabor, kunye neziko le-Ekaristi Isidlo sangokuhlwa sokugqibela.
Ngobuqaqawuli: ukuvuka kweNkosi, ukunyukela ezulwini, ukufika kukaMoya oyiNgcwele kuMariya nabaPostile, ukuthathwa kukaMariya nokubekwa kwakhe ezulwini njengeNtombi Enyulu.
Nangona amanye amaKatolika eOthodoki engavumi ukwamkela indlela entsha yokuthandaza nge rosari, namhlanje ukufundwa kwerosari kusetyenziswa phakathi kwamaKristu ngolu hlobo lulandelayo:
Umnqamlezo ubanjelwe ezandleni zomqondiso womnqamlezo, emva koko kuthandazwa umThetho wokuTshabalalisa. Intsimbi yokuqala enkulu kufuneka yenziwe ukuba ibe nguBawo Wethu, ngelixa kwiincakuba ezintathu ezizayo kusithiwa Mvumeleni uMariya, kufundwe ubuqaqawuli ngaphambi kokuqala kwibala elikhulu elilandelayo.
Emva koko kuyaziwa imfihlakalo yokuqala yerosari ayichukumisayo ngolu suku kwaye kuthiwe uBawo Wethu. Ke kulamaso alishumi kulawo amancinci isichotho uMariya ubizwa ngaxeshanye njengoko kufundwa imfihlakalo.
Ubuqaqawuli buyafundwa emva kweshumi iSichotho sikaMariya, kodwa inokufakwa endaweni yomthandazo weNtombi Enyulu kaFatima. Amashumi aseleyo afundwa ngolu hlobo lulandelayo:
10 oobawo bethu.
10 Bingelela uMarys
Ucamngca ngemfihlelo ehambelanayo, xa ufika kwimfihlakalo yesihlanu uphela ngokufunda iLitany kunye nokugcinwa kwendlovukazi.
Unganqikazi ukubeka izimvo ngeli nqaku kwaye ungacebisa abahlobo bakho kwiinethiwekhi zentlalo. Kwakhona, ukuba ufuna ukwandisa ulwazi olunikezwe kule posi, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo Zingaphi iimfihlakalo ezenziwa yirosari? apho unokuqinisa inkcukacha nganye.